पत्रकार कँडेलको ‘मोसो’ बजारमा – Click Khabar
२०७७, २० मंसिर शनिबार0
चितवनः पत्रकारितामा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताउनुभएका पत्रकार सूर्यप्रकाश कँडेलले लेखेको मोसो उपन्यास बजारमा आएको छ । युरेका पब्लिकेसनले ‘मोसो’ बजारमा ल्याएको हो ।
पत्रकार कँडेलको पहिलो साहित्यिक कृति हो ‘मोसो’ । चितवनमा रही पत्रकारितामा क्रियाशील कँडेल नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला कार्यसमिति चितवनका सल्लाहकार समेत हुनुहुन्छ । वि. सं. २०५५ साल असोजमा चितवन सन्देश साप्ताहिकबाट पत्रकारिताको यात्रा सुरm गर्नुभएका कँडेल गहन समाचार र फिचर लेखनमा दख्खल राख्नुहुन्छ । हाल उहाँ नागरिक दैनिकको चितवन संवाददाता र सफल खबर डट कमको समाचार सम्पादकका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ । यसअघि उहाँले १४ वर्षसम्म अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको चितवन समाचारदाता भई काम गरिसक्नु भएको छ ।
व्यस्त दैनिकीका बीच उपन्यास लेखनका लागि समय मिलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउने कँडेलले पुस्तक लेख्न सुरु गरेर पूरै सिध्याउन ठ्याक्कै तीन वर्ष लागेको बताउनु भयो । मोसो उपन्यासको कथावस्तु पत्रकारितासँग जोडिएको कँडेलको भनाइ छ ।
‘उपन्यास आफैमा एउटा बेग्लै संसार हो । त्यहाँ विभिन्न पात्र, परिवेश, घटना, वेदना, आक्रोश, द्वन्द्व, कौतुहलता हुन्छ । मोसोमा पनि यी सबै कुरा छन्’ पत्रकार कँडेल भन्नुहुन्छ, ‘मोसोभित्र एउटा ठूलो सामाजिक सन्देश छ । पत्रकार भन्दैमा सबै दूधले नुहाएका हुँदैनन्, पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम पनि हुन्छन्, भएका छन् भन्ने सन्देश ‘मोसो’ बाट पाइन्छ ।’
पत्रकारिताको आडमा सीमित पत्रकारले गरेका नराम्रा कामले समग्र पत्रकारलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टि धमिलो हुन थालेपछि समाजको आँखामा पत्रकारिताको सही चित्र प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी बोधले पनि ‘मोसो’ लेख्न प्रेरित गरेको उहाँ बताउनु हुन्छ ।
‘पत्रकारिताको पोखरी पछिल्लो समय धमिलिएको छ, हिलो जम्न थालेको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यही हिलोको बीचमा कमलका फूलजस्ता पत्रकार पनि छन् । हिलोमा रमाउने किरा पनि छन् । इमानको गोरेटोमा हिँडिरहेका पत्रकार कमलका फूल हुन् । बेइमानीको कमाई गर्ने पत्रकार किरा हुन् । यो अन्तर देखाउन पनि ‘मोसो’ को जन्म हुन पुगेको हो ।’
दुई सय तीस पेजको सो पुस्तकको मूल्य रु ३ सय ८५ रहेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) चितवनको कार्यालयमा ओली समुहको तालाबन्दी
२०७७, ११ पुष शनिबार0
पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमण कम भएसँगै जनजीवन सामान्य बन्दै